सामोआमा स्वागत छ | यात्रा समाचार
समोआमा स्वागत छ
मारिएला क्यारिल | | ओशिनिया, के हेर्ने
यदि म जीवनमा कस्तो हुनुपर्दछ भनेर सोच्छु भने स्वर्ग मलाई थाहा छैन तर म सँधै प्रशान्त महासागरमा टापुको कल्पना गर्छु, सूर्य, ताडको रूख, क्रिस्टल सफा पानी, सेतो बालुवा, समुद्री हावा र धेरै शान्ति। ¿सामोआ, शायद?
सामोआ को एक राज्य को लागी पोलिनेशिया र तपाईंले पक्कै पनि यो प्राकृतिक स्वर्ग बारे सुन्नुभयो किनभने यसको एक शक्तिशाली टोली छ रग्बी र अविश्वसनीय परिदृश्य। मलाई लाग्छ सामोआको यात्रामा जाँदा जब यो महामारी समाप्त भयो। आज, सामोआ र यसका पर्यटक आकर्षणहरू.
2 सामोआ पर्यटन
हामीले भनेझैं, यो एक स्वतन्त्र राज्य हो जुन पोलिनेसियामा छ र प्राविधिक रूपमा ओसिनियाको अंश हो। यसका अन्य नामहरू पहिले जर्मन सामोआ र पश्चिमी सामोआ थियो, तर १ 1962 .२ पछि यसलाई साधारण सामोआ भनिन्छ र यो एक स्वतन्त्र राज्य हो (न्युजील्याण्डबाट)। यसमा दुई मुख्य टापुहरू, सवाई र उपोलु छन्.
यसको पहिलो बासिन्दा करीव 3500, .०० वर्ष अगाडि फिजीबाट आएका थिए र युरोपियनहरूले १ XNUMX औं शताब्दीमा गरे, यद्यपि यो अन्तिम सम्पर्क १ th औं शताब्दीमा बेलायतीहरूको हातबाट गरिएको थियो। यो लामो औपनिवेशिक युग थियो युनाइटेड किंगडम, जर्मनी र संयुक्त राज्य अमेरिकामा फैलियो।
१ 1962 XNUMX२ सम्म यो न्युजील्याण्ड प्रशासनको अधीनमा थियो। आज यो संसदीय गणतन्त्र हो, सरकारको अ form्ग्रेजी फारमबाट प्रेरित। यो एउटा क्रिश्चियन देश धेरै जसो दुईवटा टापुहरू बिभिन्न जिल्लामा विभाजित छन्। यी टापुहरू ज्वालामुखी मूलका हुन् र त्यहाँ केही टापुहरू छन्, आठ सबैमा, वरिपरि। यहाँको जलवायु उष्णकटिबंधीय छ लगभग २º डिग्री सेल्सियसको वार्षिक औसत र नोभेम्बर र अप्रिलको बीचमा धेरै वर्षाको साथ।
सामोआ सजिलै उडानबाट साढे तीन घण्टामा अकल्यान्डबाट पुग्न सकिन्छ। मा प्रवेश को एयरपोर्ट फेलोलो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, अपोलो टापुको राष्ट्रिय राजधानी अपियाबाट 35 XNUMX मिनेट मात्र। यहाँबाट तपाईं यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ वा सवाई'को टापुमा अर्को उडान लिन सक्नुहुन्छ। शहर पुग्नको लागि तपाईं बस वा ट्याक्सी लिन सक्नुहुन्छ।
टापुहरूको वरिपरि पुग्न सजिलो छ किनकि तपाईं सक्नुहुन्छ कार वा बाइक वा स्कूटर भाँडामा लिनुहोस् र स्वतन्त्रता छ। अन्यथा तपाईं जहिले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सार्वजनिक बसहरु, जसले केवल नगद स्वीकार गर्दछ वा सख्त तालिकामा रहन्छ। दुई मुख्य टापुaद्वारा जोडिएको छ नौका सेवा नियमित रूपमा व्यक्ति र कार लिन्छ र पछि, सानो टापुहरू, चार्टर डु boats्गामा पुग्छन्।
सुरु गरौं हामी कसरी उपोलुमा देख्न सक्छौं?। टापुको दक्षिणपूर्वी तटमा एक सुन्दर ठाउँ छ, जुन विश्वमा प्रसिद्ध छ: Tou Sua कल 30 मिटर गहिरो समुद्र मा खाडलरमाईलो वनस्पति र समुन्द्रको महान दृश्यहरूले घेरेको पौडी खेल्ने अनौंठो र सुन्दर ठाउँ। त्यहाँ एउटा काठको प्लेटफर्म छ जुन तपाईं उफ्रिनुहुन्छ र यो एकदम राम्रो छ। तपाईंले प्रविष्ट गर्न भुक्तान गर्नुभयो, तर तपाईं यसलाई याद गर्न सक्नुहुन्न।
उत्तरी तटमा त्यहाँ अर्को छ प्राकृतिक पोखरी यो ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा गठन गरिएको थियो र समुद्र मुनिको गुफाबाट उत्पन्न हुने वसन्तमा खुवाइन्छ। पानी क्रिस्टल स्पष्ट तर न्यानो छ र गुफा महान छ। यहाँ वरिपरि स्नोर्कलिंग भन्दा राम्रो केही छैन। यो बारे मा छ पुइल गुफा पोखरीए, २ia किलोमिटर टाढा अपियाबाट समुद्री तट राजमार्ग पछि।
तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ रोबर्ट लुइस स्टीभेन्सन संग्रहालय, को लेखक खजाना टापु। यो अपिया शहर माथि छ र यो बगैचा संग एक सुन्दर घर छ। एक हवेली, वास्तवमा, जहाँ सामोआको प्रेममा लेखक बस्थे। बगैंचाहरु को माध्यम बाट एक फरक तीव्रता को दुई पथ को अनुसरण गरेर अन्वेषण गर्न सक्छ, जो माथि जान सम्म प्रत्येक एक लाई अद्भुत दृश्यहरु प्रदान गर्दछ।
अपियाको बाहिरी भागमा पनि हो पालोलो दीप समुद्री भण्डार, एक सुरक्षित क्षेत्र। तपाईं समुद्री किनारबाट एक सय मिटर पछाडि पौडन सक्नुहुन्छ, चट्टानको माथि, तपाईं सम्म पुग्नुभन्दा सम्म प्राकृतिक एक्वैरियम। कोरल पर्खालले सुरक्षा र एक सुन्दर पानीमुनि स्वर्ग, सुपर विविधता सहित, समेट्छ समुद्री कछुए, शार्क र उष्णकटिबंधीय माछा। तपाईं स्नोर्कलिंग उपकरण भाँडामा लिन सक्नुहुनेछ र सानो स्टोरले खाद्यान्न र पेय पदार्थहरू दिन्छ र आश्रयहरूको साथ समुद्री तटमा पहुँच दिन्छ।
तटमा, त्यहाँ पनि छन् नामुआ भनिने सुन्दर सानो टापु। यसमा पुग्नको लागि लालमोमानु गाउँबाट डु boat्गामा केवल १० मिनेट लाग्छ। यो को लागी एक महान गन्तव्य हो दिन ट्राईपो समुद्र किनारको झुण्डमा रातभर बस्न। पानी कम र शान्त छ, त्यहाँ समुद्री कछुवाहरू छन् र चट्टानहरू २०० t को सुनामीबाट पुन: प्राप्ति भए पनि, सबै कुरा पहिले नै सुन्दर छ र टापुको वरिपरि हिंड्ने ठाउँ र यसको पहाडहरू पनि अद्भुत छन्।
बारेमा कुरा गर्दै लालोमानु समुद्र तट सुपर लोकप्रिय छ, यसको सेतो बालुवा र सानो रिसोर्ट र रात बिताउन क्याबिनहरूको साथ। रिसोर्ट्समा प्राय: राती, फोकलोरिक कार्यक्रमहरू हुन्छन्, र सामान्यतया यो पारिवारिक गन्तव्य हो।
सामोन संस्कृति जान्नको लागि तपाईं फे'अ समोआमा भाग लिन जान सक्नुहुन्छ अपियामा सामोन सांस्कृतिक गाउँ। अन्य सुन्दर र लोकप्रिय तटहरू हुन् Matareva बीच र सलामुमु बीच। अन्तमा, अन्य धेरै चीजहरूमा तपाईं पनि वर्षा वनहरूमा हिंड्न सक्नुहुन्छ, झरनाहरू, माछाहरू हेर्नुहोस्, भ्रमण गर्नुहोस् ल्यानोटो' ज्वालामुखी ताल, माउण्ट फिमोई आरोहण ...
यदि तपाईं अधिक चपी समुद्र चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई कहिँ भेट्टाउनुहुनेछ, तर त्यहाँ छ, र यो जहाँ तपाईं सिक्न वा सर्फ गर्न सक्नुहुन्छ, दुबै उपोलु र छिमेकी सवाई'मा। यो अन्य टापुको कुरा गर्दै, हामी सवाईमा के गर्न सक्दछौं? यहाँ, Satoalepai गाउँ मा तपाईं हरियो कछुए संग पौडी गर्न सक्नुहुन्छ कैदमा जुन पछि रिहा हुन्छन्। यो कछुवा अभयारण्य एक स्थानीय परिवार द्वारा संचालित हो जसले साइट कायम राख्न न्यूनतम प्रवेश शुल्क लिन्छ र यो अपोलुबाट फेरीमा साढे एक घण्टा मात्र हुन्छ।
यस टापुमा छ सालाउला लाभा क्षेत्र, the माउन्ट सिलिसिली लगभग १ 1900 ०० मिटर अग्लो वर्षा वनले घेरिएको छ मानस बीचe, सबै भन्दा लोकप्रिय, को केप Mulinuu, ला पागोआ झरना, मोनेट मटावानु र यसको सुन्दर दृश्यहरू, पानी प्वालबाट प्वाल भएको प्वाल Alofaaga, Tafua crater, Peapea Cave, तटसँगै एक किलोमिटर भन्दा बढीको सुख्खा ज्वालामुखी ट्यूब Mataolealel वसन्तवा, Dwarfs Paia को गुफा, करीव एक किलोमिटर लामो त यो एक दिन वा लोकप्रिय ढुone्गा घर मा अन्वेषण गरिएको छ।
अन्तमा, केहि बढि सामोआको बारेमा जानकारी:
मौसम आर्द्रता र सबै वर्ष तातो छ। त्यहाँ नोभेम्बर देखि अप्रिल सम्म एक बरसातको मौसम छ र उच्च वर्षा चोटी डिसेम्बर र मार्च को बीच हो।
यो भ्रमण गर्न चिकित्सा बीमा गर्न सुविधाजनक छ।
तपाईले बोतलको पानी पिउनुपर्दछ र खोप लगाउनु पर्छ जुन खोपबाट हामी आफैंलाई पश्चिममा दिन्छौं किनकि हामी बच्चाहरू थियौं। म अनुमान गर्छु कि CXovid 19 पनि चाँडै नै अर्डर हुनेछ।
यहाँ लामखुट्टेहरू छन् त्यसैले डेंगू, जिका र चुकुनगिया छन्। त्यसैले कि विकर्षक आवश्यक छ।
भूमिमा कुनै विषालु पशु र कीरा छैन।
तपाईं ड्राइभ गर्न सक्नुहुनेछ तर तपाईंलाई आफ्नै राष्ट्रिय दर्ता आवश्यक छ र अस्थायी इजाजतपत्रको लागि यहाँ आवेदन दिनुहोस् जुन कार भाडा एजेन्सीबाट सीधा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
यद्यपि क्रेडिट कार्डहरू स्वीकार गरिएको छ, यो धेरै गर्न सुविधाजनक छ नगद। स्थानीय मुद्रा सामोन लग हो।
आइतवार पवित्र छ त्यसैले कुनै खुल्ला हिडाइ छैन।
सामोआमा त्यहाँ साँझको प्रार्थनाको लागि कर्फ्यू रहेको छ। नाम छ sa र सामान्य रूपमा यो साँझ and र6को बिच हुन्छ। घण्टी वा शेल ट्रिन्केट बज्छ र २० मिनेट भन्दा लामो समय सम्म रहन्छ। यस समयमा, गाउँहरू बीचमा सर्दै वा हल्लाइबाट बच्नुहोस्।
सामोआलाई 60० दिन भन्दा कमको लागि भिसा आवश्यक पर्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » ओशिनिया » समोआमा स्वागत छ